Mwepụta nke Science Translate - AfricArXiv
bipụtara Otu Tụgharịa Science on 6th May 2021 6th May 2021
Obi dị anyị ụtọ ịbụ akụkụ nke Tụgharịa Sayensị otu, tinyere ndị otu si Open Science movement na Onye Ọmụma Ya. Site na mmekorita a, AfrikaArXiv ga enye aka i kwalite asusu di iche-iche n'Africa na nkwurita okwu ndi oka mmuta.
Nke a mara ọkwa na mbụ e bipụtara na blog.translatescience.org/launch-of-translate-science/
Ndị otu a nwere nzụlite na mkpali dị iche iche. Onye na-amụ banyere mmiri Dasapta Irawan ọ ga-amasị ndị sayensị ka ha nwee ike ide asụsụ ndị ha na-ejere ozi. Ben Trettel na-arụ ọrụ na mmebi nke ụgbọ mmiri na-agba aghara na akwa ụta na-eleghara ọtụtụ nghọta sitere na akwụkwọ esemokwu Russia anya. Victor Venema na-arụ ọrụ na usoro ihu igwe a na-ahụ anya ma chọọ ozi gbasara usoro mmụba (akụkọ ihe mere eme), nke edebere n'asụsụ mpaghara; ubi ya kwesịrị ịghọta mmetụta ihu igwe n'ebe niile na data dị mma sitere na mba niile nke ụwa. Luke Okelo, Johanssen Obanda na Jo Havemann na-arụ ọrụ na AfricaArxiv - Portal Access Access nke obodo na-eduzi iji kwalite mmepụta nchọpụta Africa. Ha nwere mmasi ihu akwukwo ndi sayensi na asusu ndi Afrika kariri ihe ngbachi akwukwo nke ndi mara akwukwo nke asusu ndi amaala na-ebuso agha ma bia n'oge na adighi anya igosiputa oru mmekorita iji tugharia ihe odide akwukwo nke Afrika n'ime asusu Afrika di iche iche.
Maka otu okwu a "Akwụkwọ sayensị" nwere ụdịdị dị iche iche ma nwee ike ịpụta ihe ọ bụla site na isiokwu, akụkọ na akwụkwọ, na akwụkwọ nkọwa, aha, isiokwu na okwu. Nchịkọta n'asụsụ ndị ọzọ na-enye aka.
Anyị nwere mmasị n'ọtụtụ ọrụ iji nyere aka ntụgharị asụsụ: inye ozi, ịkparịta ụka n',ntanet, ịhazi na iwulite ụlọ ọrụ yana ịchụ nta maka ịhụ ntụgharị dị ka nrụpụta nyocha bara uru.
Anyị nwere blog a, anyị Wiki, anyị ndepụta nkesa na a micro-ịde blọgụ na akaụntụ maka mkparịta ụka maka ihe anyị nwere ike ime iji kwalite ntụgharị asụsụ na ịnye ozi gbasara etu esi eme ntụgharị na ịchọta ndị adịlarị.
Ngwaọrụ dị iche iche (yana obodo ndị na-eji ha) nwere ike inyere aka chọta ma mepụta nsụgharị. Ebe nchekwa data nwere isiokwu atụgharịrị nwere ike ime ka achọpụtakwu ha. Ihe nchekwa data a kwesiri ijuputa ndi mmadu na ulo oru ndi mere asusu, ya na precursor ọdụ data na isiokwu si translation magazin (site na oge Agha Nzuzo). Iji ihu njikwa dị mma (API) ndị njikwa njikwa, akwụkwọ akụkọ na ndebe ntinye na usoro nyocha ndị ọgbọ nwere ike na-egosi na ntụgharị asụsụ na-akpaghị aka. Adị nchekwa data ahụ nwekwara ike inye aka wulite data nke enwere ike iji zụọ usoro mmụta igwe maka ntụgharị asụsụ obere asụsụ dijitalụ.
Enwere nnukwu ngwaọrụ n'ihi na na-emekọ nsụgharị nke arụmụka ngwanrọ. Ngwá ọrụ ndị yiri nke ahụ maka isiokwu sayensị ga-enye aka karịa: ịsụgharị isiokwu nke ọma chọrọ ịmara asụsụ abụọ na isiokwu ahụ; Nchikota a di nfe karie iji nweta otu ma otutu ntughari ya bu ihe uto. Ntughari akpaaka nwere ike inye ihe mbu ma chekwaa otutu oru.
Ọ bụrụ na anyị nwere ike ịchọpụta isiokwu ndị kachasị baa uru ịsụgharị nke nwere ike ime ka mkpalite nke ntọala sayensị (mba) nwee ike ịkwado nsụgharị ha. Na iji ihe Asụsụ ọtụtụ asụsụ Wikidata anyị nwere ike melite nyocha akwụkwọ na asụsụ dị iche iche, ya mere nakwa ederede dị mkpa n'asụsụ ndị ọzọ. Na mgbakwunye, anyị nwere ike ịme ederede nsụgharị n'asụsụ dị iche iche na ndị na-abụghị ndị na-asụ asụsụ nwere ike iweta Nkọwa na asụsụ ala nna ha nke okwu siri ike.
Kama inwe ekele maka ya, nsụgharị ụfọdụ na-edugakarị na ntaramahụhụ. Google na-ata ndị mmadụ ahụhụ na-atụgharị mkpụrụokwu na mberede n'ihi na ngwanrọ ha na-ahụ nke ahụ dị ka spamming isiokwu, ebe a na-ahụkarị isiokwu ndị atụgharịrị dị ka ihe ederede. Anyị kwesịrị ikwu maka nsogbu ndị dị otu a ma gbanwee ngwa ọrụ na iwu dị otu a ka a ga-eji kwụọ ndị ọkà mmụta sayensị na-atụgharị isiokwu ha ụgwọ.
Bekee dị ka asụsụ nkịtị emeela ka nkwurịta okwu zuru ụwa ọnụ dị mfe na sayensị. Agbanyeghị, nke a emeela ka nkwukọrịta okwu n'etiti ndị na-abụghị Bekee sie ike. Maka ndị na-asụ bekee ọ dị nfe ịkatọ mmadụ ole na-asụ bekee maka na anyị na ndị ọbịa na-asụ bekee na-emekọrịta. Ẹkere ke n̄kpọ nte owo biliọn kiet ẹsem Ikọmbakara. Nke ahụ pụtara na ijeri mmadụ asaa adịghị. Dịka ọmụmaatụ, n'ọtụtụ ọrụ ọrụ ihu igwe na Global South ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-asụ Bekee, mana ha na-eji akụkọ nduzi atụgharịrị nke World Meteorological Organisation (WMO) ọtụtụ. Maka WMO, dị ka nzukọ ndị otu ọrụ ihu igwe, ebe ọrụ ihu igwe ọ bụla nwere otu votu, ịtụgharị akụkọ nduzi ya niile n'ọtụtụ asụsụ bụ ihe kacha mkpa.
Ndị na-abụghị Bekee ma ọ bụ ndị na-asụ asụsụ dị iche iche, na mpaghara Africa (na ndị na-abụghị ndị Africa), nwere ike isonye na sayensị nha anya site n'inwe usoro a pụrụ ịdabere na ya ebe a nabatara ma sụgharịa ọrụ sayensị nke edepụtara n'asụsụ Bekee ma ọ bụ nke ọzọ asụsụ) na nke ọzọ. Ihe mgbochi asụsụ ekwesịghị idafusị amamihe sayensị.
Isiokwu sayensị atụgharịrị na-emeghe ndị mmadụ oge niile, ndị na-anụ sayensị, ndị na-akwado ya, ndị ndụmọdụ, ndị na-azụ ọzụzụ, ndị ndụmọdụ, ndị na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ, ndị dọkịta, ndị nta akụkọ, ndị nhazi, ndị nchịkwa, ndị ọkachamara na ndị sayensị. Ihe mgbochi dị otu a itinye aka na sayensị dị ezigbo mkpa na isiokwu dịka mgbanwe ihu igwe, gburugburu ebe obibi, ọrụ ugbo na ahụike. Transfernyefe ihe ọmụma dị mfe na-aga ma ụzọ abụọ: ndị mmadụ na-erite uru na ihe ọmụma sayensị na ndị nwere ihe ọmụma sayensị kwesịrị ịma. Nsụgharị na-enyere ma sayensị ma ọha mmadụ aka. Ha na enyere ihe ohuru aka ma gbochie nnukwu nsogbu di n ’uwa banyere ngalaba mgbanwe ihu igwe, oru ubi na aru ike.
Isiokwu sayensị ndị a sụgharịrị na-eme ka ọganihu sayensị pụta ngwa ngwa site na ịbanye na ihe ọmụma ma zere ịrụ ọrụ abụọ. Ha si otú a na-eme ka ogo na sayensị ka mma. Ntụgharị asụsụ nwere ike ịka mma nkwupụta ọha, itinye aka na sayensị na mmuta sayensị. Mepụta nke isiokwu sayensị sụgharịrị na -emepụta dataset ọzụzụ iji melite ntụgharị asụsụ akpaka, nke ọtụtụ asụsụ ka na-efu.
Dịka ị gụrụ ugbu a, ị nwere ike inwe mmasị na ntụgharị asụsụ na sayensị. Soro anyị. Dee anyị oge ọ bụla: anyị nwere oku 2-kwa izu na ndepụta nzipu ozi. Hapụ ikwu n’okpuru. Tinye ihe omuma gi na echiche gi anyị Wiki. Dee blọọgụ bido ịmalite mkparịta ụka. Jikọọ anyị na mgbasa ozi mgbasa ozi or tinye blọọgụ a na RSS gị. Gbasaa ozi na ịsụgharị sayensị dịịrị onye ọ bụla nwere ike inwe mmasị na ya.
E bipụtara ya na blog.translatescience.org/launch-of-translate-science/
Categories:	ọkwaNjikọ AkaDdị AsụsụNkwukọrịta Sayensị
Tags: Tụgharịa SayensịtranslationOnye Ihe Ọmụma Ya